Madaxweynaha Afghanistan oo xalay xabsiyada kasii daayey maxaabiistii Taliban – Hornafrik Media Network
By Liibaan Nuur	 On Mar 11, 2020
Arrintaan ayaa qeyb ka aheyd heshiiskii ay Taliban iyo Mareykanka dhawaan ku gaareen magaalada Doha ee dalka Qatar, kaasoo hadafka ugu weyni yahay in lagu soo afjaro colaadda dalka Afghanstan ka jirta mudda 19-ka sano.
Heshiiska ayaa sidoo kale dhigaya in muddo 14 bilood ah ay dalka Afghanstan uga baxaan dhamaan ciidamada Mareykanka iyo kuwa xulufada lah ee NATO, halka Taliban looga baahanyahay in ay dib-u-heshiisiin siyaasadeed la gasho dowladda Afghanstan.
Mareykan durbaba wuxuu billaabay inuu ciidanka kasoo saaro. Sida uu sheegay afhayeen u hadlay milatariga, ilaa 8,600 oo askari ayaa laga soo saari doonaa muddo 135 cisho gudahood. Ciidanka Mareykanka ee Afganstan jooga ayaa hadda ah 13 kun.
AFRICOM iyo Al-Shabaab oo warar kala duwan ka soo saaray duqeyn ka dhacday Jannaale